Ihe Mgbochi & Mdash; Ndị ọkachamara na Semalt kọwara otú ị ga-esi chebe onwe gị
Igwe ihe na-emekarị bụ ụdị cyber-mpụ. N'agbanyeghi otutu ndi mmadu kwuru banyere ha ka ha na-acho akwukwo, enwere ihe ndi mmadu nwere ike ime iji tie ya. Ewezuga ịwụnye ngwanrọ nche, ọ dị onye mkpa ịmụta ihe phishing dị ka ịlụ ọgụ.
Site n'ịmụta otu esi amatapụta akara ngosi na-egosi phishing nwere ike, onye ọrụ ga-ahụzi ya mfe iji họrọ ụfọdụ n'ime ndepụta enyemaka ahụ, nke Oliver King, bụ onye na-akwado ahịa ahịa nke bụ Ụlọ Ọrụ Ntanetị .
Kedu ihe bụ Phishing?
Phishing bụ ụdị njirimara nke na-emekarị n'etiti ndị na-agba ọsọ. Ndị na - eme ihe a na - eji weebụsaịtị na aghụghọ na - ezigara ndị na - amaghị ihe ha ga - ezuru ozi ha - corn moisture shrink factor. Ọtụtụ, naanị ha chọrọ ozi kaadị akwụmụgwọ, na okwuntughe.
Site na ịnye njikọ na ndị na-enweghị atụ, ha na-ezuru ozi ozugbo ha abanye na saịtị ahụ. Ha na-enye njikọ ndị na-ele anya na a pụrụ ịtụkwasị obi iji nweta nkwenye. Imirikiti saịtị ndị a na-ekpofu gụnyere PayPal, eBay, Yahoo !, na MSN. N'ọnọdụ ụfọdụ, ụfọdụ ụlọ akụ na ụba na-arụkwa ọrụ.
Chebe megide phishing
# 1. Na-akpachara anya mgbe ị na-abanye na ebe nrụọrụ weebụ nke na-ajụ banyere nzuzo nzuzo karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ụdị ego. Imirikiti òtù ndị ziri ezi anaghị ajụ onye ahịa ka o nye gị ozi dị otú a.
# 2. Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ na-ekwusi ike inye ha ozi dị nro, mgbe ahụ ọ nwere ike ịbụ ọnyà..Ụfọdụ phishers dị ka iji usoro egwu egwu, mgbe ụfọdụ ọ na - eyi egwu ka enwere akaụntụ ahụ ma ọ gwụla ma enwere ụfọdụ ozi. Kpọtụrụ onye ahịa ahụ ozugbo iji gosi na njirimara ha bụ isi iji zere mgbalị phishing.
# 3. Tupu ịme ihe ọ bụla na saịtị ahụ, mara na iwu nzuzo. Imirikiti ebe nrụọrụ weebụ na-emepụta iwu nzuzo ha na-eme ngwa ngwa na elu nke ibe ha. N'okpuru ha, chọpụta ndepụta nzipu ozi, ịmara ma ha ga-achọ ma ọ bụ na ha agaghị ere.
# 4. Gọọmentị na-achọ arịrịọ maka ozi bụ ihe mgbaàmà ọzọ na - egosi ọrụ phishing. Adịghị emekarị ozi ịntanetị ụgha. Otu ozi email sitere na ụlọ akụ mgbe niile nwere akaụntụ ndekọ ma ọ bụrụ na otu n'ime ha meghere otu. Mgbasa ozi Phishing nwere ike ịnwe "Ezigbo Sir / Madam" na ha, ebe ndị ọzọ na-akọwa ihe ndekọ na onye ọrụ ahụ amaghịdị adị.
# 5. Ọ bụrụ na ozi email ahụ nwere ụdị agbakwunyere, nhọrọ amamihe ahụ agaghị ezu ya. Ndị na-eme ihe nchịkọta nwere ike nyochaa ozi niile banyere n'ụdị ahụ.
# 6. Mgbe ị na-ejikọta na ebe nrụọrụ weebụ, onye kwesịrị idetuo na mado njikọ na nkwụsị nyocha nke ihe nchọgharị ma ghara jikọọ site na njikọ njikọ. Naanị mee ya ma ọ bụrụ na enwere mmesi obi ike nke ịbụ eziokwu. Mgbe ụfọdụ, ụfọdụ ebe nrụọrụ weebụ phishing dị ka ndị mbụ. Ile anya na adreesị ụlọ kwesịrị ịgwa mmadụ ma ọ bụrụ na ọ bụ otu.
# 7. Ọtụtụ ndị ọkachamara na-adụ ndị mmadụ ọdụ ka ha nọrọ n'ọnọdụ, ngwa ngwa na ịrụ ọrụ nke ọma iji merie ihe omume phishing na kọmputa ha. Otu ọkachamara akwadoro bụ Norton Internet Security, nke na-achọpụta ọrụ ọ bụla phishing na-akpaghị aka. Software ahụ anaghị ekwe ka ụlọ ọrụ ọ bụla na-adịghị ahụkebe ma gosipụta ọ bụla isi ụlọ akụ ma ọ bụ ọrụ ịzụ ahịa site n'aka onye ọrụ.